Nhau - ALLWIN inoshanda nevatengi kuburikidza neCOVID-19 nguva dzakaoma
Pakutanga kwa2020, takasangana nedenda rakakosha-COVID-19. Mafekitori mazhinji aifanira kumisa kugadzirwa kwemwedzi ingangoita miviri. Mushure menguva dzakaoma, isu tatangazve zvakajairika kugadzirwa. Zvisinei, hutachiona hwave hunowedzera uye hwakaipisisa pasi rese.
Mumwe wevatengi vedu kubva kuTrinidad, tave tichishandira pamwe kweanopfuura makore gumi, akaisa odha muna Zvita 2019, uye munaKurume takagamuchira email kubva kwaari, mamiriro ezvinhu muTrinidad akakomba kwazvo, Hupfumi hwakakanganiswa zvakanyanya ne COVID19. Tichifunga kuti kubatana kwedu kwakasimba kwazvo, takafunga kumbomisa nguva yekuendesa. Isu takaudza mutengi kuti ALLWIN achasangana nedambudziko iri uye kukurira mamiriro akaoma naye. Mushure mekuchengetera zvinhu mudura redu kwemwedzi ingangosvika mitanhatu, takaendesa zvinhu mwedzi wapfuura uye takagamuchira muripo pakupera kwaGunyana.
Kunyangwe hazvo COVID-19 ichiri kukanganisa nyika kutenderera pasirese, mamiriro ari kuramba achiipa nekuita nani. Tine chivimbo chekukunda hutachiona uhu, uye ALLWIN ichagamuchirwa nekufarirwa nevamwe vatengi.